Madaxa Sirdoonka Soomaaliya Wuxuu la shaqeeyaa Xulufo al qaacida ah Marka maxaan u maalgelinaa? | Allbalcad Online
Home WARARKA Madaxa Sirdoonka Soomaaliya Wuxuu la shaqeeyaa Xulufo al qaacida...
Madaxa Sirdoonka Soomaaliya Wuxuu la shaqeeyaa Xulufo al qaacida ah Marka maxaan u maalgelinaa?
Soomaaliya waxay noqotay god lacag looga helo Mareykanka. Sanadihii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka ayaa boqolaal milyan oo doolar sanad walba ku daadisay dalka.
Bil uun ka hor, Danjire Donald Yamamoto iyo Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa kala saxiixday heshiis lagu dhimayo deynta Mareykanka ee Soomaaliya. “Markii ay Soomaaliya gaarto heerka ugu dambeeya… Mareykanka wuxuu cafin doonaa in ka badan 1 bilyan oo deyn ah,” ayaa lagu yiri warbixinta safaaradda.
Yamamoto, oo istiraatiijiyad Soomaaliya u qaabeeyay kaaliyaha xoghayaha ka hor jagada uu haatan hayo, ayaa umuuqata inuu rumeysan yahay in lacagaha la soo marsiiyo Muqdisho ay u suuragelin karto dowladda Soomaaliya inay soo iibsato saaxiibbo iyo xulafo.
Inta badan maalgashiga Mareykanka wuxuu ku jiray shakhsiga Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed, oo ay Soomaalidu u taqaano “Farmaajo”, laakiin in badan oo ka mid ah rajada Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa u muuqata mid meel ku dhacday. Isu dhiibida madaxtinimada Soomaaliya, Farmaajo wuxuu isu ekaysiiyay wax badan kadib markii adeerkiis (kaligii taliyihii hore ee Siyaad Barre, oo hawlihiisa iyo harraadkiisa awood u horseeday Soomaaliya inay ku dhacdo fashilaad dawladnimo) marka loo eego dhiirigelin kasta oo la uruuriyay sannadihii uu joogay Maraykanka.
Farmaajo waxaa laga yaabaa inuu madaxweyne noqdo, laakiin malaha ninka ugu awoodda badan Soomaaliya waa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo ah madaxa Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka. Farmaajo waxaa laga yaabaa inuu isku dayo inuu mideeyo isbahaysi siyaasadeed, laakiin Fahad waa ninka ugu dadaalka badan Soomaaliya ee looga hortagayo argagixisada iyo, aragti ahaan, barta xiriirka ee u dhexeeya sirdoonka kala duwan ee doonaya inay ka adkaadaan kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida. . In Mareykanka sidoo kale lagu soo warramey inuu maalgeliyo hay’adda sirdoonka ee Soomaaliya ayaa ka dhigeysa inuu si toos ah u bartilmaameedsado sir culus oo Mareykan ah. Buug-gacmeedka, Fahad sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa inuu lacag ka helo Qatar iyo sidoo kale Turkiga sidoo kale.
In maalgashiga noocaas ah uusan bixin wax la yaab leh. Quusin qoto dheer oo ku saabsan taariikh nololeedka Fahad waxay soo jeedineysaa inuu si wanaagsan u noqon karo ninka al Qaacida ku dhex jira dowladda Soomaaliya.
Dukumiintiyada Fahad iyo Soomaaliya ee Fahad (nuqullo ka mid ah aan haysto) waxay sheegayaan inuu ku dhashay magaalada Mandheera ee dalka Kenya, bishii Luulyo 1978, meel u dhow xadka Soomaaliya, inkasta oo xubnaha qoyskiisa ay sheegeen inuu ku dhashay magaalada Beled Xaawo, ee gobolka Gedo ee Soomaaliya. , sanad kahor.
Qabaa’ilku muhiim ayey u yihiin Soomaaliya Fahadna wuxuu ka dhashay mid yar: Reer Aw-Xasan, waa beel ka mid ah Kalweyne, oo ku urursan gobolka ay Soomaalidu degto ee Itoobiya. Markii uu Fahad ahaa afar jir, hooyadiis Xaliima Saciid Dheere iyo aabihiis way kala tageen, Fahadna wuxuu hooyadiis ka raacay Gedo ilaa Muqdisho, halkaas oo ay degtay magaalo ku taal xaafadda Hawlwadaag ee caasimadda, meel u dhow halka uu dhacaayo dhacdada Black Hawk Down hadhow dhaca.
Fahad wuxuu wax ku bartay madarasooyin taxane ah, oo uu ka mid yahay Macallin C / raxmaan Dheere, agagaarka masjidka Salama, iyo Masjidka Isbaheysiga Islaamka. Inta badan waxbarashadiisii ​​aan quraanka ahayn waxay umuuqataa inuu ahaa mid iskiis wax u bartay halkii uu ka ahaan lahaa mid rasmi ah. Carruurta yaqaanna waxay ku sifeeyaan inuu yahay qof keli ah.
Dabayaaqadii sideetameeyadii, Xaliima waxay guursatay Cabdulqaadir Gardheere, oo ka soo jeeda qabiilka Mareexaan. Kuwii yaqaanay Cabdulqaadir waxay ku sifeeyeen inuu yahay qof diinta jecel. Waxaa jiray xiisad bilow ah oo udhaxeysa Fahad iyo aabihiis, oo ku adkeystay in Fahad uu qaato qaab nololeedkiisa xagjirka ah ama lagu tuuro wadooyinka. Ugu dambeyntiina, Fahad wuu kufsaday, Cabdulqaadirna durba wuxuu bilaabay inuu dhallinta Fahad ku barbaariyo xagjirnimada.
Sanadkii 1991, markii uu burburay taliskii Siyaad Barre, Fahad qoyskiisa waxay u qaxeen Kenya sababtoo ah aabaha iyo hooyada labaduba waxay xiriir qabiil la lahaayeen madaxweynihii hore. Waxay magangalyo ka heleen dhowr sano xerada qaxootiga Utanga oo u dhow Mombasa. Utanga, Fahad wuxuu hogaamiye salaadeed ka noqday masaajidka Abu Dujana.
Halkaas ayuu kula kulmay Cabdishakuur Cali Mire iyo Gamal Maxamed Hasan, oo labaduba ku lug lahaa al Ittihad al Islamiya, oo Mareykan iyo UN-ku ay ku tilmaameen argagixiso xiriir la leh al-Qaacida. Xiriirka saddexda qof wuu sii socday: Gamal maanta waa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta caalamiga ah ee Soomaaliya, awood uu sidoo kale ku helo lacagta gargaarka Mareykanka, Cabdishakuurna waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka.
Markii uu internetku hawada ka baxay, Fahad wuxuu la wareegay teknolojiyadda cusub wuxuuna durbadiiba helay taageerayaal shaqadiisa ah bog xagjirnimo wadani ah oo lagu magacaabo Somalitalk.com halkaas oo uu kaga hadlay siyaasadda, inta badanna laga eego aragtida Islaamiyiinta. Markaa waxaa jira farqi u dhexeeya howlihiisa guud, iyadoo asxaabta qaar ay u soo jeedinayaan inuu u safray Yemen si uu u sii wato waxbarashadiisa diineed, halka asxaabta kale ay leeyihiin halkii uu u aaday Pakistan.
Si kastaba ha noqotee, markii uu ku soo noqday Soomaaliya, wuxuu la kulmay Faarax Sheekh Cabd
Next articleIlhaan Cumar oo ka baxday Heshiiskii ay kula jirtay Shirkadda Ninkeeda